MobilePay FAQ | 360ed
What is 360ed Universe App? ( 360ed Universe App ဆိုတာဘာလဲ )
Is Learning Platform App for Students, Teachers and Parents to learn and practice ကျောင်းသား/သူများ၊ ဆရာများ နှင့် မိဘများအတွက် Learning Platform App ဖြစ်သည်
What is included in? ( ဘာတွေပါလဲ )
All Grades and Subjects based on Myanmar curriculum မြန်မာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း အတန်းစုံ၊ ဘာသာစုံ ပါဝင်ပါမည် Other Supported Apps, International Alphabet, Music, Vocabularies…etc will be included အခြားသင်ထောက်ကူ App များ (International Alphabet, Music, Vocabularies … etc) ပါဝင်ပါမည်
What is feature? ( ဘာအစီအစဉ်တွေပါလဲ )
Free Version - အခမဲ့ ဗားရှင်း မြန်မာနိုင်ငံသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့အညီ ဘာသာရပ်အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အခမဲ့လေ့လာနိုင် Paid Version - အခပေး ဗားရှင်း ထပ်မံလေ့လာသင်ယူချင်သူ၊ လေ့ကျင့်မှုတွေ ပိုမိုလုပ်ချင်သူ ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေ အ တွက် အပိုဆောင်း သင်ခန်းစာတွေ၊ ကစားနည်းတွေ စကားလုံးအသစ်တွေကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Premium Version - အထူး ဗားရှင်း သင်ခန်းစာတွေကို ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သုံးဖက်မြင် ပုံရိပ်ယောင် သင်ခန်းစာများနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လေ့လာနိုင်မည့် App များဖြစ်ပါတယ်။ Learning App - သင်ယူခြင်း App Positive reinforcement & Interactive play-based learning - အပြုသဘောဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ကစားမှုကို အခြေခံသည့် သင်ယူမှု Formative assessment - ပုံစံဖြင့်အကဲဖြတ်ခြင်း Standard & quality on demand - လိုအပ်မှုအပေါ်စံ & အရည်အသွေး
System Requirement ( Phone/Tablet အတွက် လိုအပ်ချက်များ )
Need Phone/Tablet to use 360ed Universe App 360ed Universe App ကို အသုံးပြုဖို့ ဖုန်း/တက်ဘလက် လိုအပ်ပါ တယ်။ Phone/Tablet should have the following Specification ဖုန်း/တက်ဘလက်မှာ အောက်ပါအရည်အသွေးတွေပါရပါမယ် 1. Android Version -6to 9
2. Ram - 3G and above
3. Camera – 12M Pixels